Avy any atsimon’ny Nosy: mpila ravinahitra ireo nitoby tao Fianarantsoa | NewsMada
Avy any atsimon’ny Nosy: mpila ravinahitra ireo nitoby tao Fianarantsoa
Mitotaly 528 ireo mpila ravinahitra avy any atsimon’ny Nosy tonga tao Fianarantsoa hatramin’ny talata teo. Ankizy ny 102 amin’izy ireo, vehivavy ny 105 ary 140 ny lehilahy. Nahitana vehivavy bevohoka roa sy zokiolona 11 amin’izy ireo.
Efa nisy ireo nanohy ny lalany hihazo ny Renivohitra sy ny faritra handehanany hiasa. Omaly, 111 sisa ireo olona tafajanona ao amin’ny toerana andraisana azy ireo.
Mandray an-tanana ireto mpila ravinahitra ireto ny minisiteran’ny Mponina ao amin’ny faritra Matsiatra Ambony, tarihin’ny talem-paritra, Ranja Herivololona Phillipe. Miara-miasa amin’ny Jirama sy ny minisiteran’ny Rano izy ireo amin’ny fikarakarana ireo olona avy any atsimo ireo.
Nisy ny fanadihadiana nataon’ny minisiteran’ny Mponina ka nahafantarana fa mpila ravinahitra any Soavinandriana, any Alaotra Mangoro, any Mahajanga, eto Antananarivo… ireo olona ireo. Namonjy fetin’ny Krismasy sy ny faran’ny taona tany Tsihombe sy tany Betioky izy ireo ka hiverina hamonjy ny asany any amin’ireo faritra indray.
Nanaraka azy ireo anefa ny ankohonany sy ny fianakaviany sasany noho ny hamafin’ny kere any amin’ireo ambanivohitra niaviany ireo ka izay ny antony nahabetsaka azy ireo tamin’ity indray mitoraka ity.
Efa misy tonga eto Antananarivo
Tsikaritra hatry ny omaly fa efa misy amin’ireo mpila ravinahitra ireo ny hita mitoby etsy Fasan’ny Karana. Miandry ny fandehanany any amin’ireo toerana hiasany izy ireo amin’izany. Miaraka amin’ny zaza amam-behivavy ireto mpifindra monina ireto.
Araka ny fantatra ihany koa, karandalina roa lehibe ny nosakanan’ny mpitandro filaminana omaly ao Soanala any amin’ny distrikan’i Betroka. Nitondra olona mihoatra ny tokony ho izy no antony, ka tsy maintsy nasaina niandry taksiborosy hafa ny mpandeha sasany. Nandoa ny sazy sy ny lamandy mifandraika amin’izany kosa ireo mpamily, fa tsy hoe nosakanana tsy handeha akory, raha ny fanazavana avy amin’ny zandary.